Orinasa makiazy tarehy, mpamatsy - mpanamboatra tarehy vita amin'ny tarehy China
OEM Face Make-up Fixer spray 120ml fanosorana menaka fanamainana Mazava ho azy Microfine zavona fanamboarana menaka fanosotra.
Fa maninona no mila manamboatra spray? Ny famafazana toerana dia hanampy amin'ny fampihenana ny mari-pana amin'ny tarehy, manampy ny makiazy hifikitra maharitra amin'ny hoditra. 2. Asio tombo-kase amin'ny toerany. Rehefa mangatsiatsiaka kokoa ny hoditra amin'ny tarehy ary mihalava ny makiazy, dia mora kokoa ho an'ny famafazana ny manidy ny makiazy amin'ny toerany. Inona izany ? Ny famafazana fikolokoloana tarehy no fitaovam-piadiana miafinao amin'ny tarehy tsy misy tsiny. Ny alikaola dia misy aloe, dite maitso, kokombra, ary vitamina A, C, ary E hampitony sy hamandoana ny hoditra. Ahosotra amin'ny borosinao na ...
Fandraisana an-tsokosoko ranon-javatra 6ml matte farany famaranana maharitra 16 ora endrika miafina maharitra miaraka amina kalitao avo lenta
Fandraisana an-tsoratra feno Matte ranon-javatra miafina J202 rakotra feno, akanjo maharitra 16 ora izay manafina, manitsy, mihorakoraka ary manasongadina ny hoditra tsy misy tsiny.
Fototra tsy misy solika tsy misy fatrany Matte Liquid fototra fandrakofana feno 20ml fananganana maharitra maharitra miaraka amin'ny SPF15
Matte tsy misy fotony Liquid fototra J203 rakotra feno, lanja maivana, misy endrika tsy misy menaka noho ny mifangaro voajanahary amin'ny hoditra ho an'ny famaranana semi-matte tsara tarehy izay maharitra tontolo andro, Manampy amin'ny fanitsiana ny volon-koditra tsy mitovy izy io ary manana alokaloka 40 isika , mifanentana tanteraka amin'ny karazan-koditra rehetra.
Famaritana marika manokana momba ny marika mena miloko marevaka vita amin'ny rano mineraly voasesika volo 5 loko
Inona izany ? Ity volon-koditra malefaka velvety ity dia manome loko maharitra maharitra ho an'ny vokatra mifantoka malefaka. Layer ambonin 'ny fototra sy ny miafina na mitafy irery mba hijerena endrika miloko tonga lafatra. Vovon-tsiranoka marevaka miaraka amin'ny akora tsara ho an'ny hoditra izay manome loko miloko voajanahary sy azo haorina. Manome vokatra tsara mifantoka malefaka sy fijery mamirapiratra. Item NO J0207 Brand Jinfuya na Manaova endrika marika mineraly anao manokana, endrika misy loko. Mety ho an'ny ankamaroan'ny mifanentana amin'ny ...
Makeup Base Primer Mety tsara amin'ny karazana hoditra rehetra Matte Finish Mineral Infused Face Primer ho an'ny famoronana fototra malefaka
Inona izany ? Ny Mineral Face Primer no fitaovam-piadianao miafina amin'ny tarehy tsy misy tsiny. Rehefa apetraka alohan'ny makiazy anao, ity fotony ity dia hanome endrika toy ny an'ny zazakely, matte voajanahary ny tavanao raha miady amin'ny menaka sy fahamainana izy. Mamela ny fototra iorenanao hanao ny asany fa tsy hianjera amin'ny toerana tsy mety eo am-panomanana ny paleta (tarehy )o ho an'ny vovoka maivana na makiazy feno - manapa-kevitra ianao. Nozaraina Jinfuya mba hahatonga ny hatsarana tsara indrindra ho azon'ny maso sy ny molotra ary ny tarehy rehetra. Ny maha-izy anao dia tsy misy fetra, ary ...
Highlighter Makeup Palette Facial Highlighter Baked Waterproof maharitra maharitra mamiratra manamaivana ny lokon'ny tarehy tarehy vovon-koditra
Inona izany ? Ny paleta avo lenta dia ny volavolan-tsolika malefaka amin'ny paletaidin'ny Kaleidoscope mitsororoka amin'ny hoditra ary mihosin-damba noho ny mifanohitra amin'ny fanamafisana azy. Manadoka manokana ny hoditra matotra izany satria tsy hanasongadinana ny tsipika mandoa sy ny mason-koditra ny raikipohy. Item NO J2222 Brand Jinfuya na Manaova Teknolojia marika anao manokana 100% voajanahary ary manankarena amin'ny akora biolojika isan-karazany. Namboarina tsy misy gluten, preservative ary artifisialy pigment. Mety amin'ny misy amin'ny alokaloka voajanahary 4 ...